Fa Maninona izahay - Yunis International Trading Co, Ltd.
Tongasoa eto amin'ny varotra YUNIS
Any Chine ny mpandraharaha nividy dia asan'ny asa. Ny fividianana zavatra toa mora be.Oo, ny tena zava-misy dia lavitry ny tranga mahazatra. Ny asan'ny mpandraharaha mividy matihanina any Chine dia hafa noho ny toeram-pivarotana lehibe. Ny takiana mpividy dia takiana hahitana tsara izay tadiavin'ny mpanjifa. Mba hanaovana izany, dia tokony hanana fahalalana tsara ny vokatra sy ny vidiny ny mpandraharaha nividy. liana amin'ny klioba ny mpanjifa.
Avy eo, raha mpanjifa vaovao ianao, mividy entana amin'ny fandefasana kely ary amin'ny minitra farany dia mila mpandraharaha mividy mahaliana ianao, izay afaka mameno ny fitakinao amin'ny vidiny, ny tahiry ary ny fepetra.
Nahoana ianao no mila serivisy Agence nividy ao Shina?
Amin'ny lafiny iray, ny ankamaroan'ny orinasa shinoa SMALL sy MID dia tsy manana fahazoan-dàlana Export mivantana amin'izao fotoana izao ary ny mpividy dia tsy afaka mividy ara-dalàna sy mivantana amin'izy ireo. Ireo orinasa ireo dia hampiasa ny Export Agent Agent any Chine hiarovana ny tombotsoany. Ny mpividy dia manolo-tena hampiasa ny mpandraharaha Export na Import azy hiarovana ny tombotsoany any Sina amin'ny toe-javatra toa izany. Amin'ny lafiny iray, mpiantoka manafatra na mpanondrana ihany koa dia hiasa ho mpanampy sy maso anao manokana, izy ireo hanampy anao amin'ny famokarana orinasa tsaratsara kokoa, hifehezana ny risika amin'ny raharaham-barotra, hifehezana ny kalitao ary hanolotra serivisy aorian'ny varotra sy ny fivarotana sns eto Chine. Amin'izay dia afaka mitahiry fotoana sy vidiny bebe kokoa ny mpanjifa.
afaka manolotra farafaharatsiny manaraka ny asa na serivisy ho an'ny mpanjifany manerantany isika:
· Famokarana mpamatsy na orinasa vaovao
· Fanaraha-maso ny mpamatsy mpamatsy.
· Fifampiraharahana eo amin'ny vidiny
· Fandefasana sy Logistic
· Fanefana haban-tseranana
· Ny fanaraha-maso ny kalitao
· Serivisy aorian'ny famarotana